कसरी फोटो अनुप्रयोग iOS9मा काम गर्दछ आईफोन समाचार
कसरी फोटो अनुप्रयोग iOS9मा काम गर्दछ
आईओएस फोटो अनुप्रयोग एकदम सहज छ, तर त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामी उम्कन सक्छौं। आईओएस In मा त्यहाँ केही नवीनताहरू छन्, जस्तै औंला उठाउनुपर्दैन वा फोल्डरहरू स्वचालित रूपमा सिर्जना गरेको खण्डमा धेरैलाई छनौट गर्ने सम्भावना जुन हामी सेल्फी लिन्छौं वा स्क्रिनसट लिदा पनि। ताकि तपाईले कुनै विवरण हराउनु हुँदैन, यस गाईडमा हामी व्याख्या गर्ने कोशिश गर्नेछौं कसरी फोटो अनुप्रयोग iOS9मा काम गर्दछ।
आईफोन सेटिंग्समा, फोटो र क्यामेरा सेक्सनमा, हामीसँग आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी सक्रिय गर्ने विकल्प छ। यदि हामी यो विकल्प सक्रिय गर्दछौं भने, सबै फोटोहरू आईक्लाउडमा हुनेछ र कुनै पनि उपकरणमा उपलब्ध हुनेछ जुन समान एप्पल आईडी प्रयोग गर्दछ। म यसको प्रयोगको बिरूद्ध सल्लाह दिन्छु, तर म स्ट्रिमिंग फोटो विकल्प सक्रिय भएको सल्लाह दिन्छु। यदि हामी आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी सक्रिय गर्छौं भने, हामीले प्रयोग गरेका सामान्य रिल देखापर्ने छैन। के म अर्को वर्णन छ संग छ आईसीक्लोड फोटो लाइब्रेरी असक्षम गरियो.
फोटो अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्दा हामी देख्ने पहिलो चीज तीन ट्याबहरू हुन्:
फोटो ट्याबमा हामी हाम्रो हेर्नेछौं momentos। यी क्षणहरू हुन् वर्ष र संग्रह द्वारा अलग। यदि हामीले छविहरूका थम्बनेलहरू छोयौं भने, हामी वर्षौंदेखि संकलनमा र संकलनबाटको क्षणहरूमा बढ्नेछौं। यदि हामी जियोलोकेशन सक्रिय भएमा, हामी शहरको नाम पनि छुन सक्दछौं, जसले नक्शाको थम्बनेल खोल्नेछ र यसमा फोटोहरू नीलो बेलुनमा राख्नेछौं जसले स each्केत गर्दछ कि हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा कति तस्बिर खिचेका छन।
ट्याबमा साझेदारी गरिएको हामीले साझेदारी गरेका फोटोहरू वा हामीसँग हाम्रा सम्पर्कले साझेदारी गरेको फोटोहरू देखा पर्नेछन्। मसँग यो सक्रिय छैन, तर छविहरू साझेदारी गर्न "साझेदारी सुरू गर्नुहोस्" मा ट्याप गरेर साझेदारी गर्न सकिन्छ, एल्बम सिर्जना गरेर र मान्य एप्पल आईडी संकेत गर्दै।
ट्याबमा Bulbumes जहाँ हामी भन्न सक्दछौं कि हाम्रा सबै फोल्डरहरूको साथ सामान्य रील छ।
एल्बम ट्याबमा हामीसँग:
रिल। यस फोल्डरमा हामीले हाम्रो आईफोनमा भएका सबै फोटोहरू राख्दछौं।
स्ट्रिमिंगमा मेरो फोटोहरू। यदि हामीले आईफोन सेटिंग्सबाट सक्रिय गरेका छौं भने, पछिल्लो १००० फोटोहरू वा पछिल्लो 1000० दिनको कुनै पनि उपकरणसँग लिइएको जुन समान एप्पल आईडी प्रयोग गर्दछ र स्ट्रिमि photos तस्बिरहरू सक्रिय गरिएको छ यहाँ थपिने छ।
भिडियोहरू। यस फोल्डरमा हामीले बनाउने सबै भिडियोहरू राखिने छ।
मनपर्ने। हामी तस्बिरलाई मनपर्नेको रूपमा चिनो लगाउँन सक्छौं यदि यदि हामी मुटु छुन्छौं जुन तिनीहरू प्रत्येकको तल देखा पर्दछ। यो फोटोमा प्रयोग गर्न आउँदछ जुन हामीलाई एकै फोल्डरमा सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ।
स्क्रीनशटहरू। यो आईओएस in मा नयाँ विकल्प हो जसमा सबै स्क्रिनसटहरू प्रविष्टि हुन्छन्। यो त्यस्तो काम हो जुन हामी एक दिनमा धेरै क्याप्चर गर्दछौं भने, यदि हामी चाहन्छौं भने हामी ती सबै एकैचोटि मेटाउन सक्छौं।
स्वयं चित्रण। यो आईओएस in मा पनि नयाँ छ र फेसटाइम क्यामेराका साथ लिइएको सबै फोटोहरू यस फोल्डरमा जान्छन्।
हटाईयो। सबै तस्विर र भिडियोहरू "हटाइएको" फोल्डरमा जान्छन् र 30० दिनसम्म रहनेछ, जबसम्म हामी तिनीहरूलाई मैन्युअल रूपमा मेटाउँदैनौं। यससँग होशियार रहनुहोस्, धेरै प्रयोगकर्ताहरू अन्त्यमा गुनासो छ कि उनीहरूसँग खाली ठाउँ छ र यो फोल्डरले यो कब्जा गरेको छ।
यदि हामी एल्बम सिर्जना गर्न चाहान्छौं भने हामी प्लस स touch्केतमा टच गर्नेछौं, हामी नाम प्रविष्ट गर्नेछौं र त्यसपछि हामी ठीक छुनेछौं। तर यदि हामी के चाहान्छौं कि एक फोल्डर सिर्जना गर्नु हो जुन भित्र एल्बमहरू समावेश गर्न सक्दछौं, हामी थिच्नेछौं र प्लस चिन्ह (+) एक सेकेन्ड समात्नेछौं र त्यसपछि हामी सिर्जना फोल्डरमा टच गर्नेछौं।
1 बहु छविहरू चयन गर्नुहोस्
2 फोटो अनुप्रयोगको साथ छविहरू सम्पादन गर्नुहोस्
बहु छविहरू चयन गर्नुहोस्
आईओएस In मा हामी धेरै छविहरू छनौट गर्न सक्दछौं औंला उठाइएन। यो गर्न, हामी केवल एक छुन्छौं र हामी दायाँ वा बायाँ स्लाइड गर्दछौं। जब चयन मार्कहरू देखा पर्न सुरू हुन्छ, अब हामी छिटो छनौट गर्न माथि वा तल स्वाइप गर्न सक्छौं। यदि हामी शुरूबाट माथि वा तल स्लाइड गर्यौं भने हामी के गर्छौं सबै छविहरू सार्न।
फोटो अनुप्रयोगको साथ छविहरू सम्पादन गर्नुहोस्
सब भन्दा साधारण भनेको छवि क्रप गरेर वा घुमाएर पुनःआकार गर्नु हो। एक पटक हामीले छुनुभयो सम्पादन गर्नुहोस्जुन शीर्ष दायाँ तिर छ, तल हामी तीन ट्याबहरू देख्दछौं। पहिलो (रद्द गर्न अर्को) काँटछाँट गर्ने, घुमाउने वा ढाँचा परिवर्तन गर्ने हो।
Para एक छवि क्रप गर्नुहोस् हामी केवल कुनामा हामी इच्छित बिन्दुमा सार्नु पर्छ। त्यसपछि ठीक ट्याप गर्नुहोस्।
Para छवि घुमाउनुहोस्, हामी केवल अघिल्लो स्क्रिनशटमा चिनो लगाइएको आइकनमा टच गर्नेछौं। यो सँधै देब्रेतिर मोडिनेछ।
Para ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्, यदि हामी यसलाई १ 16: in मा छोड्न चाहान्छौं, उदाहरणका लागि, हामी बटनमा टच गर्नेछौं जुन मैले क्याप्चरमा चिन्ह लगाएको छ र त्यसपछि हामी इच्छित ढाँचा छान्न सक्छौं।
माथिको बाँया तीनवटा बिन्दुहरूमा ट्याप गरेर हामी खोल्न सक्छौं अर्को फोटो सम्पादकपिक्सलमेटर वा स्किच जस्तो।
यदि हामी मा छुन्छौं Wand, अनुप्रयोग प्रयास गर्नेछ सबै प्यारामिटरहरू सुधार गर्नुहोस् यसलाई यसको उत्तम देखिने बनाउनको लागि, सबै स्वचालित रूपमा।
यदि हामी बीचमा शीर्ष आइकन छान्छौं भने हामी सक्दछौं रातो आँखा हटाउनुहोस्। मैले आफ्नो फोटोको साथ यो प्रयास गरेको छु कि मेरो भाईको कुकुरको पनि रातो थिएन, तर केहि चमक हटाईएको छ।
हामीसँग पनि उपलब्ध छ विभिन्न फिल्टरहरू तिनीहरू मध्यमा आइकनमा छोएर पहुँचयोग्य छन् जुन त्रिकोणको आकारमा तीन बिन्दुहरू जस्तै छ। हामीले केवल एउटालाई छनौट गर्न सक्दछौं जुन हामीलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ।
आइकनमा जुन आवाज बढाउन वा घटाउनमा पा a्ग्राजस्तो देखिन्छ, हामी सक्छौं प्रकाश, र mod्ग परिमार्जन गर्नुहोस् र यसलाई कालो र सेतो बनाउनुहोस्.
टिप्पणी गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि मैले केहि छोडेको छु वा त्यहाँ केही छ जुन तपाईंलाई थाहा छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी फोटो अनुप्रयोग iOS9मा काम गर्दछ
माफ गर्नुहोस्, कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ किनकि आईओएस my मा मेरो एल्बमहरू मेटाइएको छ, मसँग कुनै रील वा भिडियो छैन वा हालसालै केही मेटिएको छ। मसँग भर्खरै सबै फोटोहरू छन्। धन्यवाद
नमस्ते, अल्फोन्सो। आईफोन सेटिंग्समा, फोटो सेक्सनमा, तपाईसँग आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी सक्रिय छ? यदि त्यस्तो हो भने, तपाईंको रिल क्लाउडमा छ र कुनै उपकरणमा उपलब्ध छ। यो एक सामान्य रील हो।
मैले आईक्लाउड फोटोहरू साझा गरेको छैन र ती अझै देखा पर्दैनन्
तर के तपाईंसँग आईफोन सेटिंग्सबाट विकल्प सक्रिय छ? यो सेटिंग्स / फोटो र क्यामेरा मा जान र आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी निस्क्रिय पार्नु हो।
यदि मँ सबै चीज iCloud बाट अक्षम छ। एल्बमहरू एक दिन देखि अर्को दिन हराउँथे।
IOS को कुन संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ? अघिल्लोमा त्यहाँ रील थिएन।
तल्लो भागमा तपाई के देख्नुहुन्छ? फोटोहरु र केहि अरु, ठीक छ?
फोटो र एल्बमहरू र एल्बमहरूमा रिल, भिडियोहरू, ढिलो गति भिडियोहरू, इत्यादि हुनुपर्दछ। त्यहाँ केहि छैन
र तपाइँ कसरी आइट्युनहरूसँग सि sy्क गर्नुहुन्छ? यदि यो हराइसकेको छ भने, यो गल्ती हुन सक्छ। म एक रिबुट जबरजस्ती गर्दछु र यदि यसले मेरो लागि काम गरेन भने, म पुनःस्थापना गर्दछु।
मैले आईफोनलाई पुनःस्थापना गरें र त्यसपछि मैले ब्याकअप लोड गरें र त्यो उस्तै रहन्छ
तपाईले टिप्पणी गरेको कुरा अचम्म लाग्छ। म जगेडा पुन: प्राप्त बिना पुन: भण्डारण गर्दछ। सम्पर्कहरू, नोटहरू, इत्यादि, म उनीहरूलाई आईक्लोडको साथ समक्रमण गर्नेछु र यसले पुन: प्राप्ति गर्दछ। बाँकी (अनुप्रयोगहरू, फोटोहरू, आदि) म्यानुअल रूपमा आईफोनमा स्थान्तरण हुनेछ।
म आईओएस with को साथ हेर्न प्रतीक्षा गर्नेछु यदि यो हटाईएको हुँ भने म त्यसो गर्ने छैन, धन्यवाद।
ऑस्कर प्याज भन्यो
शुभ साँझको साथी, म जान्न चाहान्छु कि तपाईले एल्बमहरू पुन: प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ, यसै क्षणमा मलाई के हुन्छ र मलाई के गर्ने थाहा छैन ...
यो थाहा छ यदि दिन the सुरूवात हो र हामी आईओएस update लाई अपडेट गर्न सक्दछौं? वा यो भर्खरै देखाईनेछ र पछि प्रकाशित हुन्छ?
नमस्कार येशू अहिले सम्म, नयाँ संस्करण आईफोनको परिचय पछि एक हप्ता पछि जारी गरिएको छ। यदि केहि हुँदैन भने, विकासकर्ताहरूको लागि अन्तिम बिटा (गोल्डन मास्टर) 9th मा र अर्को हप्ता पछि जारी हुनेछ, आधिकारिक अन्तिम संस्करण। त्यहाँ सेप्टेम्बर १ of को कुरा छ, तर हामी सबै गलत हुन सक्छौं। अन्तिम बीटा एक महिना भन्दा बढीको लागि आशा गरिएको थियो ...
मसँग आईफोन ss छ र मसँग आईओएस .4 ..9.3 संस्करण छ र धेरै महिनासम्म जब म फोटोहरू फेसबुकमा अपलोड गर्छु यसले iOS फोटो एल्बममा अपलोड गर्दैन मलाई आशा छ कि उनीहरूले मलाई मद्दत गरे।
एक दिनदेखि मेरो आईफोनमा रिल र मेटाइएको फोल्डर हरायो, सबै कुरा बिभिन्न रूपमा संगठित भएको छ, म पढ्छु र मैले देख्छु कि धेरैले एउटै प्रश्न सोधिरहेछन्, म हेर्न चाहान्छु कि त्यहाँ यसको समाधान छ वा यो केहि हो? त्यो एप्पलले लागू गर्यो। मसँग संस्करण 9.3.2 ..XNUMX.२ छ
तपाईंको उत्तर पाब्लोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँसम्म,9मा तिनीहरूले आईओएस9को लागि आधिकारिक मिति दिनेछन्, हैन? अहिले मसँग विकासकर्ताहरूको लागि बीटा have छ, त्यसैले यो दिन5भए पनि मसँग नयाँ बिटा छ जसले यी साना बगहरू ठीक गर्दछ।
मलाई त्यस्तै लाग्छ। र, यदि केहि पनि हुँदैन भने, तपाईं सँग पनि9गोल्डन मास्टर हुनेछ।
यो मलाई भइरहेको छ जुन मैले संस्करण अपडेट गरे पछि फोटोहरू अपलोड गर्दा तिनीहरू सेलफोनबाट अपलोड गरिएका फोटोहरूमा जान्छन् न कि फेसबुकमा आईओएस एल्बममा। कसैलाई थाहा छ यसको कारण के हो? म तिनीहरूलाई सँधै फोटोहरू र केहि पनि अपलोड गर्दिन। उसलाई के हुन्छ मलाई थाहा छैन। म यो संस्करण मन पराउँदिन।
आईओएस .8.4..XNUMX सँग यसको के फरक छ?
के यो राम्रो हुने थिएन यदि iOS9 आम जनतालाई उपलब्ध भएको बेला यो खबर आउँदछ? त्यसकारण यो अधिक व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी हुनेछ (थप रूपमा, अब आईओएस those मा भएका व्यक्तिहरू हुन् किन कि उनीहरूले यसलाई डाउनलोड गर्ने तरिका जान्दछन्, त्यसैले म अनुमान गर्दछु कि उनीहरूले कसरी फोटोहरू ह्यान्डल गर्ने भनेर जान्दछन् ...)
डेभिड १ 1985 _XNUMX_ भन्यो
नमस्ते, मलाई म्याक र IOS अनुप्रयोगमा फोटो अनुप्रयोगसँग समस्या छ।
म्याकमा म फोटाहरू ट्याग गर्दछु किवर्डहरूको साथ खोजी गर्नका लागि र यो उत्तम हुन्छ। यद्यपि IOS मा ती समान फोटाहरू सि sy्ख्रोनाइजको साथ, म कीवर्डबाट खोजी गर्दछु र केहि पनि आउँदैन। ऊ केवल मेरो लागि स्थानहरू खोज्दैछ।
डेभिड १ 1985 _XNUMX लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! मलाई समस्या छ मैले मेरो आईफोन updated लाई आईओएस to मा अपडेट गर्‍यो र क्यामेराले काम गर्दैन, न त अगाडि नै। जब चयन हुन्छ, पर्दा कालो हुन्छ, तर सबै क्यामेरा सेटि options विकल्पहरूको साथ। म के गरूँ ?
साल्भाडोर अल्वाराडो भन्यो
सेल्फी फोल्डरबाट फोटोहरू म कसरी हटाउन सक्छु, किनकि उनीहरूले मलाई व्हाट्सएपद्वारा पठाएका व्यक्तिहरू त्यहीं रहन्थे र यसले मलाई रद्दीटोकरीको विकल्प दिन सक्दैन, यसले मलाई भन्छ कि यो सम्पादन गर्न सकिदैन, यदि म नक्कल गर्न चाहन्छु भने। यसलाई र यसलाई सम्पादन गर्नुहोस्, तर मूल त्यहाँ रहन्छ
साल्भाडोर अल्भाराडोलाई जवाफ दिनुहोस्
म जान्न चाहान्छु कि कसरी आईफोनमा एल्बम transfer क्यामेरा रोल to मा मेरो कम्प्युटरबाट फोटोहरू ट्रान्सफर गर्न
नमस्ते, मलाई समस्या छ, म जान्न चाहान्छु कि यदि फोटोहरू मेटाउँदा फोटाहरू मेटाउँदा फोटाहरू रिकभर गर्न सकें भने, मेरो भान्जाले मेरो सेल फोन लिए, म तिनीहरूलाई रिकभर गर्न चाहन्थें तर मलाई महसुस भएन कि मैले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटायो।
मलाई थाहा छ म पुन: प्राप्ति गर्न सक्दछु तर कसरी
वेलिंग्टनलाई जवाफ दिनुहोस्
म फोटोहरू प्रकाशित गर्न फेसबुक आईओएस एल्बम देख्दिन, किनकि म आईओएस to लाई अपडेट गर्दछु फोटोहरू जीवनीमा जान्छन्।
Dianis लाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई भइरहेको छ जुन मैले संस्करण अपडेट गरे पछि फोटोहरू अपलोड गर्दा तिनीहरू सेलफोनबाट अपलोड गरिएका फोटोहरूमा जान्छन् न कि फेसबुकमा आईओएस एल्बममा। कसैलाई थाहा छ यसको कारण के हो? म तिनीहरूलाई सँधै फोटोहरू र केहि पनि अपलोड गर्दिन। उसलाई के हुन्छ मलाई थाहा छैन। म यो संस्करण मन पराउँदिन। यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने, अग्रिम धन्यवाद।
यही कुरा मेरो फोटो फेसबुकमा साझेदारीको साथ हुन्छ, तिनीहरू मोबाइल अपलोडमा जान्छन् IOS एल्बममा होइन
मेरी क्यासास भन्यो
म पनि, के कसैले समाधान फेला पारे?
मेरी कासासलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, कृपया, मलाई पनि समस्या छ
हो, कृपया यसका साथ मद्दत गर्नुहोस्!
म कसरी गर्न सक्दछु जब म फेसबुकमा मेरो रिलबाट फोटो अपलोड गर्छु, यो आइओएसबाट भन्छ
मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ ..
मेरो फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्दा म मेरो iOS एल्बम फेला पार्न सक्दिन, यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने म यसको कदर गर्दछु
नमस्ते पाब्लो, म जान्न चाहन्छु कि भिडियो बिटरेटले आईओएस9लाई 1080 60० पी format० प्रारूपमा ल्याउँछ, धन्यवाद
मलाई यो हुन्छ कि एक क्षण देखि अर्को रील फोल्डर र नयाँ मेटाइएको फोल्डर गायब भयो र अब के हुन्छ यो हो कि मैले फोटोहरू मेट्न सक्दिन जुन पहिल्यै मेटिएको थियो र यसले ठाउँ भर्दछ…। तपाईं यस धन्यवाद संग मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
नमस्कार, मलाई पनि त्यस्तै भयो कि तपाईं धेरैले मेरो रिलबाट सबै एल्बमहरू हराउनु भयो, कसैले समाधान फेला पारे वा किन त्यसो भयो? यो एप्पल को अभिनय को लागी हुनेछ?
नमस्ते, मैले स्क्रिनशट लिन खोजिरहेको छु तर केहि देखा पर्दैन, केवल PNG भन्ने छवि मात्र हो, फोटोहरू सामान्य काम गर्छन् तर स्क्रिनशटले गर्दैन, के तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी थाहा पाउने यदि तपाईको आईफोन दुर्भावनापूर्ण ट्वीक भाइरस बाट संक्रमित छ
विकिरण टापु यस महिना नि: शुल्क पाउनुहोस् IGN को लागी धन्यवाद। हामी कसरी देखाउँछौं